Iyo yemahara PS4 uye PC mutambo Brawlhalla ikozvino yavapo yeIOS | IPhone nhau
Fornite, Call of Duty: Warzone, Paladins ... ndiwo mamwe emahara mazita anowanikwa ese maPC nekunyaradza, mitambo inosanganisa zvakateedzana zvekutenga-mukati-app izvo zvinongokanganisa hunhu hweaesthetics, kwete kugona kwavo. Kusiya iyo hondo royale genre, isu tinowanawo mamwe emahara mazita semafaro
Tiri kutaura nezve Brawlhalla, Ubisoft multiplayer platform zita iro yakangomhara paApp Store, uye senge mavhezheni ePC uye ekunyaradza, inowanikwa kuti itorwe zvachose mahara uye inotipa mukutenga-mu-app izvo zvinongogadzirisa chimiro chemunhu.
Brawlhalla ndeye yemahara chikuva kurwa mutambo une vanopfuura mamirioni makumi mana vatambi. Iri zita rinotibvumidza kunakidzwa mitambo yepamhepo nevatambi vanosvika vasere pamapuratifomu ayo aripo, saka hapana chikonzero chekusatamba neshamwari dzedu, zvisinei nepuratifomu yavanoshandisa.
Izvo Brawlhalla inotipa
Yemakwikwi Online 1vs1 uye 2vs 2 - Enda kubva Tin level kusvika Platinum. Rwisa vavengi wega kana kubatana pamwe neshamwari dzako. Mutambo unoenderana newe nevatambi vezera rakaenzana.
4-player yemahara-ye-ese modhi - Anokurumidza machisi uko 4 vatambi vanorwira uye mumwe chete anogona kuhwina (sekuMusingafi).
Crossplay - Koka shamwari dzako dzinosvika gumi nemasere kubva pamapuratifomu kusvika kumitambo yechinyakare: 8vs4, 4vs1, 3vs2, zvese zvinopesana zvese ...
Mhando dzakasiyana dzemitambo: Brawlball, Bombsketball, Tora Mureza, Kung-tsoka uye akawanda mamwe mutambo mutambo mutambo.
Kamuri Yekudzidzisa - Kamuri uko isu patinogona kudzidzira hunyanzvi hweumwe neumwe wevatambi kuitira kudzora hitboxes, zvinokuvadza mabhokisi ... uye uve akanakisa muhondo yega yega.
Kana iwe watove kunakidzwa nemusoro uyu paconsole kana PC, iwe uchaona kuti iyo vhezheni yeIOS (inowanikwawo kune Android), iyo yakafanana vhezheni, pasina kana mutsauko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Iyo yemahara PS4 uye PC mutambo Brawlhalla ikozvino yavapo yeIOS
Aya ndiwo mamiriro eapp yekugadzwa seasipo muIOS 14